Mashaariic laga hirgeliyay degmada Walaweyn-Sawirro – Radio Muqdisho
Mashaariic laga hirgeliyay degmada Walaweyn-Sawirro
Mashruucani oo ku saabsan, sidii horumarin loogu sameyn lahaa adeegyada bulshada degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelah hoose, ayaa waxaa si wadajir ah isaga kaashanayaan maamulka Koonfur Galbeed iyo kan degmadasi, ayadoo ay maalgelinaysao hay’ada laga leeyahay dalka Norway.
Howlaha horumarinta ayaa waxaa ka mid ah dhismaha suuq ay ku ganacsadaan shacabka walaweyne, leyrar cadceeda ku shaqeeya dhismaha xarumaha mamaulka iyo goobaha kale ee muhiimka ah.
Yuusuf Cali Buule, oo ah ku simaha gudomiyaha ahne guddomiye ku xigeenka dhanka amniga degmadaasi oo ka hadalaya munaasabadaasi xariga looga jarayay mashruucasi ayaa uga mahadceliyaya dowlada Norway kaalinta ay ka qaadanayso horumarka bulshada.
Sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay Ismaaciil Rooble Cali, oo isna ka mid ha mas’uuliyiinta mamaulka ayaa si gaar ah u codsaday in qorshaha lagu daro dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyo waddooyinka oo xili roobaadka ay dhibaato ku qabaan bulshada.
Qaar kamid ah dadka degmada ayaa waxaa ay soo dhaweyeeyn howlahaasi lagu horumarinayo adeegyada bulshada ayagoo sheegey in suuq dhawaan loo hirgeliyaya uu waxbadan ka tari doono baahiyohooda.
Degmada Walaweyn oo kamid ah degmooyinka uu sida aadka ah u saameyey burburka ayaa waxaa in mudo ah ka jirtay baahiyo dhanka bulshada, waxaana talaabadan ay tahay mid wax weyn ku soo kordhin doonta horumarka bulshada degmadaas.
Afur wadareed lagu qabtay dalka Mareykanka-Sawirro